राप्रपा र नयाँशक्तिलाई ३ नं प्रदेशबासीले दिए एउटा झिनो अवसर !
प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ ५ शुक्रबार , ४,६०२ पटक हेरिएको
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादीबाट फुटेर गएका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकएक वटा स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेका छन् । पहिलो चरणमा भएको कूल २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचन मध्ये कूल २ सय ४२ स्थानको नतिजा आउँदासम्म यी दुई पार्टीहरुले एकएक ठाउँमा मात्रै विजय हाँसिल गरेका हुन् ।
यसरी कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्तिले जितेका एकएक ठाउँ भने संयोगले ३ नं प्रदेश भित्रै परेका छन् । अहिलेसम्म प्राप्त परिणाम अनुसार ३ नं प्रदेशमा अवस्थित रसुवा र धादिङमा यी दुई दलले विजय हाँसिल गरेका हुन् ।
अहिलेसम्म ३ नं प्रदेशमा सार्वजनिक भईसकेको कूल मत परिणामहरु मध्ये एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानमा विजय हाँसिल गरेको छ । एमालेले अहिलेसम्म ४३ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ । त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसले कूल ३१ र नेकपा माओवादी केन्द्रले जम्मा १५ स्थानमा विजय हाँसिल गरेको छ ।
एमालेको मेयरमा अहिलेसम्म १३ जना गाउँपालिका अध्यक्षमा ३० जना गरी कूल ४३ जना प्रदेश नं ३ बाट विजयी भएका छन् भने कांग्रेसका मेयरमा ६ जना, अध्यक्षमा २५ जना गरी ३ नं प्रदेशमा कूल ३१ जनाले विजय हाँसिल गरेका छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा ३ जना, गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १२ गरी कूल १५ जनाले विजय हाँसिल गरेका छन् । राप्रपा र नयाँशक्तिले एकएक वटा गाउँपालिकामा आफ्नो प्रतिनिधित्व देखाएको छ ।
यसरी प्राप्त मत परिणामको आधारमा भन्दा कूल ३ नं प्रदेशको स्थानीय तहको अहिलेसम्म प्राप्त विवरणको आधारमा एमालेकोे ४७ प्रतिशत स्थानमा विजय हाँसिल
भएको छ । त्यस्तै, काँग्रेसको ३४ र माओवादी केन्द्रको अहिलेसम्म ३ नं प्रदेशमा १६ स्थानमा विजय हाँसिल भएको छ ।
यसरी हेर्दा एकएक सिट ल्याएको चौथो शक्ति राप्रपा र नयाँ शक्तिलाई भने पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा सान्त्वना सिट आएको छ । उनीहरुको यो संख्या ३ नं प्रदेशमा मात्रै आएको छ र स्थानीय तहको प्रमुखमा अहिलेसम्म यो उनीहरुको प्रतिनिधिमूलक सिट पनि हो । जुन जीतलार्इ स्थानीय तहमा यी दुर्इ पार्टीले विजयाेल्लास मनाउने झिनाे अवसरकाे रुपमा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यसले उनीहरु पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा कुनै न कुनै स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने बुझाउनको लागि भने यसले सहयोग पुर्याएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति कायम गर्न जोड
नयाँशक्तिद्धारा नरेन्द्र मोदीको नारा चोरी
‘नयाँ शक्तिले एमाले बाहेक अरू पार्टीलाई धक्का दिन सक्छ’
आइतबार पार्टी घोषणा गर्दै नयाँशक्ति
नयाँ शक्तिको यति धेरै खर्च !
नयाँशक्तिमा कम्युनिष्टको यस्तो लफडा
आर्थिक र समावेशी विकास नयाँशक्तिको वैचारिक आधार